RASMI: Ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta Xiddiga bisha Janaayo ee horyaalka Bundesliga oo la shaaciyey – Gool FM
(Munich) 15 Feb 2019. Xiddiga kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Leon Goretzka ayaa ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Bundesliga Jarmalka bishii la soo dhaafay ee Janaayo.
Laacibka khadka dhexe ee Bayern, Leon Goretzka ayaa loo magacaabay xiddiga bisha Janaayo ee horyaalka Bundesliga, waxaana uu abaal-marintan ka fara-marooqsaday Marco Reus.
Ciyaaryahan Marco Reus ayaa abaal-marintan xiddiga bisha ee horyaalka Bundesliga ku guuleystay labadii bilood ee November iyo December, laakiin Goretzka oo 24-sano jir ah ayaa ka diiday sheekadaas bishaan Janaayo oo ka qaday abaal-marintan.
Maamulka horyaalka Bundesliga ayaa warkan ku xaqiijiyey website-kooda rasmiga, waxayna sheegeen in Goretzka uu abaal-marintan ku garaacay labada ciyaaryahan ee ka wada tirsan Borussia Dortmund ee Raphael Guerreiro iyo Lukasz Piszczek, ​laacibka Schalke ee Daniel Caligiuri, xiddiga khadka dhexe Hertha Berlin ee Ondrej Duda iyo difaaca Mainz ee Daniel Brosinski kuwaasoo dhammaantood u wada sharraxnaa abaal-marinta horyaalka Bundesliga ee bishii Janaayo.
Saddex gool oo uu dhaliyey labo kulan oo uu ciyaaray horyaalka bishii Janaayo ayaa Goretzka ku hoggaamisay abaal-marinta xiddiga bisha ee horyaalka Bundesliga.
Three goals in two games sees Goretzka land the #BundesligaPOTM award for January 👏
Congratulations, @leongoretzka_ 🏆@EASPORTSFIFA #FIFA19 pic.twitter.com/Lbzo33y5Gm
Inter Milan oo bedelka Mauro Icardi ka dhex aragta kooxda Manchester United... (Waa kee Weeraryahanka ay qaadanayso?)